Funda ukuthi wenzeni ngesikhathi sezulu esibi kakhulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ENew Orleans ngemuva kweSiphepho uKatrina ngo-2005
Akuyona imfihlo lokho imicimbi yezulu eyeqisayo Ziyanda ngobungozi ngenombolo emhlabeni wonke ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu. Ocwaningweni olushicilelwe e-United States, okungelombiko weSpecial Report on Extreme Events (isichazamazwi salo esiNgisini yi-SREX), kuxwayiswa ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu kuzokhuphula ukushisa okukhulu, imvula enamandla kanye nesivinini somoya kusuka Iziphepho zaseTropical.
Futhi yini thina zakhamizi esingayenza? Okokuqala, qhubeka ucele ohulumeni ukuthi banciphise ukungcoliswa kwekhabhoni, ngoba ukuphela kwendlela yokumisa i- ukushintsha kwesimo sezulu lapho iplanethi yethu icwiliswe khona okwamanje. Kungenzeka ukuthi sekwephuze kakhulu manje, kepha banesibopho sokuzama, ngoba imiphumela yomhlaba isivele inhlekelele.
Okwesibili, okumele sikwenze ukufunda ukuthi singazivikela kanjani thina nemindeni yethu ngesikhathi sezulu esibi kakhulu. Ukuze sazi ukuthi yini okufanele siyenze kwesinye salezi zimo, i-FEMA, iFederal Emergency Management Agency yase-United States, inikeza okulandelayo amathiphu:
Hlala unolwazi. Bhalisela izexwayiso zendawo eziphuthumayo ukuze uthole izibuyekezo.
Qiniseka ukuthi unomsakazo onikwe amandla webhethri noma enye idivayisi uma kwenzeka engekho amandla.
Hlela kusengaphambili. Iba nohlelo lokuphuma nezimpahla eziphuthumayo esandleni. Bheka izinhlu ezivela kwaRed Cross, iFederal Emergency Management Agency (FEMA), noma iZikhungo Zokulawulwa Nokuvimbelwa Kwezifo (CDC) ukubona ukuthi yini oyidingayo.
Hlala uxhumene nezihlobo zakho, abangane, nomakhelwane.
Qiniseka ukuthi unokudla okusemathinini okungadingi isiqandisi namanzi okuphuza. Okungenani amalitha ama-4 amanzi umuntu ngamunye nesilwane ngasinye ngosuku.
Gcina okungenani isilinganiso samanzi sezinsuku ezintathu selungu ngalinye lomndeni.
Ezimweni ezishisayo, qinisekisa ukuthi abantu abasengozini kakhulu (asebekhulile, abagulayo nezingane ezisencane) basendaweni epholile enamanzi anele.
Hlala ekhaya isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Uma ungenayo i-air conditioning, hlala esitezi esiphansi kunazo zonke, kude nemisebe yelanga. Zama ukuya nsuku zonke amahora ambalwa uye esakhiweni somphakathi esine-air conditioning.
Ngengozi yokuzwakala inhlekelele, iqiniso ukuthi izinkulungwane zezimo zezulu ezimbi kakhulu zenzeka e-United States ngonyaka ka-2011 kuphela, futhi lokhu kulindeleke ukuthi kube umkhuba emashumini ambalwa eminyaka ezayo emhlabeni jikelele. Unjalo-ke imihlahlandlela zingaba wusizo kithina kunalokho esicabanga ngakho.
Imininingwane engaphezulu - Ukudangala eTropical "Beryl" kuzoba yisiphepho esishisayo futhi
Umthombo - terra
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Funda ukuthi yini okufanele uyenze ngesikhathi sezulu esibi kakhulu